Go’aanka Barcelona ee suuqa kala iibsiga oo ku jira gacanta Mauricio Pochettino… (Sidee?) – Gool FM
Go’aanka Barcelona ee suuqa kala iibsiga oo ku jira gacanta Mauricio Pochettino… (Sidee?)
(Barcelona) 05 Maaajo 2020. Xilli Barcelona lala xiriirinayo saxiixyo waaweyn oo ay ugu horreeyaan Lautaro Martinez iyo Neymar Jr, misena waxa ay u baahan tahay inay iska iibiso xiddigo kale si ay qarash ugu hesho tukaameysiga suuqa xagaaga.
Philippe Coutinho ayaa ah xiddiga ugu hadal heynta badan ciyaartoyda iibka ka ah kooxda Blaugrana, iyadoo Barca ay ka fikireyso inay qiimo sare ku hesho, wada hadalna aysan ku furi doonin lacag ka yar 80 milyan oo euro.
Marka ay sheekada halkaas marayso, Mauricio Pochettino ayaa ka caawin kara in Barcelona ay is dhaafiso Coutinho suuqa xagaagan.
Macallinka ka soo jeeda dalka Argentina ayaa ah musharraxa ugu wayn ee lala xiriirinayo mashruuca xiga ee Newcastle, waxaana la rumeysan yahay inuu kooxdiisa ku dhisi doono kubbad sameeyaha reer Brazil oo ay horraan ka soo wada shaqeeyeen kooxda Espanyol.
Haddii Coutinho ku laabashadiisa England ay miro dhasho, waxay Barcelona heli doontaa lacag kaash ah oo ka caawin doonta inay suuqa xagaaga si wanaagsan ay kaga tukaameystaan si ay ula saxiixdaan xiddigaha bartilmaameedka u ah.
Sidoo kale waxaa xaaladdaas ka dhalan doono guul saddex geesood ah, maaddaama Coutinho uu ku faraxsan yahay ku laabasha Ingiriiska, Pochettino uu heli doono ciyaaryahankii uu doonayay, Barcelona iyaduna ay heli doono lacag kaash ah.
Xavi iyo Eto'o oo ka sheekeystay sidii Guardiola looga dhaadhiciyay inuu sii heysto weeraryahankii hore ee Barca